काम छोडेर महानगरका कर्मचारी भोजमा ! वडा अध्यक्षको हंगामा (स्थलगत भिडियो सहीत) «
काम छोडेर महानगरका कर्मचारी भोजमा ! वडा अध्यक्षको हंगामा (स्थलगत भिडियो सहीत)
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारी अफिस छाडेर भोजमा गएको पाइएको छ । ५ बजे बन्द हुने कार्यालयमा करीब ४ बजे पुग्दा अफिस लगभग सुनसान थियो । कम्तीमा पनि १५५ जना कर्मचारी हुनुपर्ने महानगरको सो भवनमा जम्माजम्मी २ दर्जन कर्मचारी मात्र थिए । यति सम्मकी कार्यालयको सोधपुछ कक्षमा पनि कुनै कर्मचारी थिएनन ।
कार्यालयमा न मेयर, न उप–मेयर न त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नै । गण्डकी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम गण्डकी छड्केले पोखरा महानगरका कर्मचारीको यो मनपरीलाई सार्वजनिक गरेको छ । किन यस्तो भयो भनेर महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई प्रश्न गर्दा, उनी आफै पनि आश्चर्यमा परेको प्रतिक्रिया दिए ।
सो दिन धेरै बिबाह र ब्रतबन्ध परेकोले जानु परेको जवाफ आफुलाई कर्मचारीहरुले दिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेष नारायण पौडेल बताउछन । कार्यालयको यस्तो हरीबिजोग देखेपछी महानगरकै वडा नं १३ का वडा अध्यक्ष दर्शन लामाले मोबाइलबाट भिडियो खिचेका थिए । यसै बिच आजकै गण्डकी छड्केमा पोखरामा भएका ५ वटा सरकारी कार्यालयको चोरी पनि देखाइएको छ । कृपया तलको पुरा कार्यक्रम हेर्नुहोस :